ဘုရားရှိခိုးကျောင်း - ဆွစ်ဇလန်ဘုရားသခင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘုရားကျောင်း
လှပသော သမ္မာကျမ်းစာရုပ်ပုံသည် ခရစ်တော်၏သတို့သမီးအဖြစ် ချာ့ခ်ျကို ရည်ညွှန်းသည်။ သီချင်းများအပါအဝင် ကျမ်းချက်အမျိုးမျိုးတွင် အမှတ်အသားပြုခြင်းအား ရည်ညွှန်းထားသည်။ အဓိကအချက်မှာ သီချင်းများဖြစ်သည်။ 2,10-16၊ သတို့သမီး၏ချစ်သူသည် ဆောင်းရာသီကုန်ပြီ၊ ယခု သီချင်းဆိုခြင်းနှင့် ရွှင်လန်းရမည့်အချိန်ရောက်လာပြီဟု သတို့သမီး၏ချစ်သူက ပြောသည့်နေရာတွင် (ဟေဗြဲဘာသာကိုလည်းကြည့်ပါ၊ 2,12) သတို့သမီးက “ငါ့သူငယ်ချင်းက ငါ့သူငယ်ချင်းပဲ၊ ငါက သူပဲ” (St. 2,16) အသင်းတော်သည် တစ်ဦးချင်းနှင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ခရစ်တော်နှင့် သက်ဆိုင်ပြီး သူသည် အသင်းတော်နှင့် သက်ဆိုင်သည်။
ခရစ်တော်သည် “အသင်းတော်ကိုချစ်၍ သူ့အတွက် ကိုယ်ကိုကိုယ်စွန့်” သောသတို့သားဖြစ်ပြီး သူမသည် “ဘုန်းကြီးသောအသိုက်အဝန်းဖြစ်နိုင်ပြီး အစွန်းအထင်းမရှိ၊ တွန့်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိုကဲ့သို့သောအစွန်းအထင်းမရှိ” (ဧဖက်၊ 5,27). Diese Beziehung, so sagt Paulus, «ist ein großes Geheimnis, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde» (Epheser 5,32).
ယောဟန်သည် ဤအကြောင်းအရာကို ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ အောင်ပွဲခံသောခရစ်တော်၊ ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်၊ သတို့သမီး၊ အသင်းတော်နှင့်လက်ထပ်သည် (ဗျာဒိတ် ၁ ကော9,6-9; ၂၈.၃1,9(၁၀) အသက်၏စကားများကို အတူတကွ ကြွေးကြော်ကြသည် (ဗျာဒိတ် ၂ ကော1,17).
အသင်းတော်အကြောင်းဖော်ပြရန် အသုံးပြုသည့် ထပ်ဆင့်အလင်္ကာများနှင့် ရုပ်ပုံများရှိသည်။ အသင်းတော်သည် ခရစ်တော်၏စံနမူနာအတိုင်း ၎င်းတို့၏စောင့်ရှောက်မှုကို စံနမူနာပြုသော ပြုစုစောင့်ရှောက်သော သိုးထိန်းများ လိုအပ်နေသော သိုးစုဖြစ်သည် (1. ဓာတ်ဆီ 5,1-4); အလုပ်သမားများ စိုက်ပျိုးရန်နှင့် ရေလိုအပ်သော လယ်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။1. ကောရိန္သု 3,6စာ-၉); အသင်းတော်နှင့် ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များသည် စပျစ်နွယ်ပင်အကိုင်းအခက်များကဲ့သို့ဖြစ်သည် (ယော၊ ၁5,5); ဘုရားကျောင်းသည် သံလွင်ပင်နှင့်တူသည် (ရောမ 11,17-24) ။
ဘုရားသခင်ရဲ့ ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ အနာဂတ်နိုင်ငံတော်တွေကို ရောင်ပြန်ဟပ်တဲ့အနေနဲ့၊ အသင်းတော်ဟာ ကောင်းကင်ငှက်တွေ ခိုလှုံရာ သစ်ပင်တစ်ပင်မှာ မုန်ညင်းစေ့ပေါက်နေတဲ့ ဘုရားကျောင်းနဲ့တူပါတယ်။3,18စာ-၁၉); ဤလောက၌ မုန့်စိမ်းကို ရှောက်သွားသော တဆေးနှင့်တူသည် (လုကာ ၁3,21), usw.
အသင်းတော်သည် ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ပြီး၊ “သန့်ရှင်းသူအသိုင်းအဝိုင်း” ၏ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဘုရားသခင်က အသိအမှတ်ပြုခံရသူအားလုံး ပါဝင်ပါသည်။1. ကောရိန္သု ၁4,33) အသင်းတော်တွင်ပါဝင်ခြင်းသည် ယုံကြည်သူအတွက် အရေးပါသောအချက်ဖြစ်သောကြောင့် ခမည်းတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ပြီး ယေရှုခရစ်ပြန်ကြွလာချိန်အထိ ကျွန်ုပ်တို့ကို ထောက်ပံ့ပေးသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။